अन्तर्राष्ट्रिय उडान शुल्कमा मनपरी, यसरी मिलाइन्छ सेटिङ्ग, मन्त्रालयमा जान्छ घुस - समय-समाचार
समय-समाचार शनिबार, २०७८ असार ५ गते, १२:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीलाई एउटा अवसर बनाएर नेपाली ट्राभल एजेन्सी सञ्चालक र नेपाल स्थित विदेशी विमान कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीले सक्दो लुटेका छन् । एयरलाईन्को कार्यालयमा नै जानुभयो भने टिकट छैन भन्छन तर ट्राभल एजेण्टले भने बढी दाम तिरे टिकट मिलाईदिन सक्ने बताउँछन् ।
करिब तीन महिना अघि निषेधाज्ञा र अन्र्तराष्ट्रिय उडान नियमित भएको बेला कञ्चनपुरका कैलाशसिंह बिष्ट मात्र ९४ हजार ८ सय ७८ रुपैया तिरेर दुबै तर्फको टिकट लिएर अमेरिकाबाट नेपाल आएका थिए । फर्किने मितिको अघिल्लो दिनदेखि नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । उनले केही दिन अघि समेत टिकट सार्न पाएनन् ।
त्यसपछि युरोप अमेरिका उडानका लागि सरकारले हप्ताको एक दिन कतार र टर्कीबाट उडान खोल्ने निर्णय लियो । यसैलाई मौका छोपेर नेपाल स्थित विदेशी विमान कम्पनीका कर्मचारी र ट्राभल सञ्चालक मिलेर कमाउनु कमाए । पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका एक असन्तुष्ट कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने यो कमाउन भनेर नै मन्त्रालयले हप्ताको एक दिन मात्र उडान दिएको हो । ‘आखिर पिसिआर टेष्ट गरेर उडान सुचारु गर्ने भए हप्ताको एक दिन दिएपछि सँधैका लागि दिए के फरक पर्दथ्यो र ? यो त यहाँ कमाउनका लागि गरिएको निर्णय,’ हो उनले भने । ‘ट्राभलका एजेण्टहरू मुठाका-मुठा पैसा बोकेर मन्त्रालय बुझाउन आउँछन्,’ उनले भने ।
हुनपनि तयस्तै भएको छ । अहिले ग्राहकले काठमान्डूबाट उड्ने अनलाईन टिकट आफैले खोज्यो भने भेट्दैन । तर एजेण्टलाइ भन्यो भने दुई हप्ता भित्रमा उड्ने टिकट मिलाईदिन्छन। त्यस्तै टिकट पाउने चक्करमा टर्किश एयर्लाइन्सको अफिस पुगेका रमेस शर्मा भन्छन, “अमेरिका उड्ने अनलाईन टिकट कति खोजे कति तर कतै पाईएन । तर ट्राभल एजेण्टसँग कुरा गर्यो भने २ लाख तिरे मिलाईदिने कुरा गर्छन । तर त्यहि डेटको टिकट भने टर्किश एयरलाइन्समै काम गर्ने कर्मचारीले मिलाउन नसक्ने बताउँछन् । भएको के रहेछ भने एयरलाईन्स ग्राहकले देख्नेगरी टिकट संख्या र सहजै अनलाईनबाट रिजर्भ गर्न सक्ने प्रणाली नै बन्द गरिदिएको रहेछ ।’
जो नेपाल वा अमेरिका आउने-जाने गर्नैपर्नेछ उनीहरुले ट्राभलमा नै सम्पर्क गर्नुपर्ने भयो । यस्तो भएपछि विमान कम्पनीको एउटा शुल्क भएपनि यता कर्मचारी र ट्राभल कम्पनीका एजेण्ट मिलेर ठूलो रकम कुम्ल्याए । त्यही चक्करमा कैलाश विष्टपनि फँसे। मात्र ९४ हजार ८ सय ७८ रुपैयाँमा दोहोरो तर्फीको टिकट लिएर आएका कैलासले फर्किन मात्र १ लाख ७५ हजार तिर्नुपर्यो ।
४७ हजार ४ सय ३९ रुपैयाँमा आउँदै गरेको अमेरिका जाने टिकटलाई उनले १ लाख ७५ हजार तिर्नुपर्यो । यो त चार गुणा बढी नै भइहाल्यो । उनले श्रीमती, १२ बर्षभन्दा कम उमेरका छोरा (केही रकम छुट) र आफ्नो सहित ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ ट्राभललाई बुझाए । उनले मात्र हैन । उनका केही आफन्तले यो भन्दापनि बढी रकम बुझाएका छन् । अरु केही व्यक्तिहरुपनि भेटिए । इकोनोमी सिटको टिकट नै २ लाख भन्दा माथी तिर्नु परेको उनीहरुले बताए ।
उनले टर्किस एयरलायन्सको टिकट खरिद गरेका थिए । काठमाडौको एक ट्राभलबाट उनले टिकट लिए । टर्किस एयरलायन्सको काठमाडौस्थित कार्यालय कहिलै खुल्ला छ भनिएन । गेटमा पुग्दा समेत सुरक्षा गार्डलाई कार्यालय बन्द छ भन्न लगाइयो । त्यहाँका कर्मचारीले फोन कहिलै उठाएनन् । त्यहि गएर सोध्दा उनीहरुले फोन धेरै आएकोले उठाउन नसक्ने व्यहोरा जनाए । ‘इमर्जेन्सी भए एउटा चिठ्ठी लेखेर हामीलाई छोड्नुहोस, सिट खालि भए हामी आफै तपाईलाई सम्पर्क गर्छु,’ टर्किश एयरलाईन्सका कर्मचारीले भने । ‘नभन्दै एक हप्ता पछि फोन आयो, तर टिकट उपलब्ध हुन् नसकने र कुनै सिट खालि नभएकोले केहि गर्न नसक्ने उनीहरुले बताए,’ रमेश शर्माले भने । ‘त्यसपछि सेवा लिनलाई म आफै ट्राभल एजेन्टसम्म जान बाध्य भए । उनीहरुले भने २ लाख तिर्नुहुन्छ भने अर्को हप्ताको टिकट मिलाईदिन्छु। ‘
टर्किस एयरलायन्सको वाईडबडी विमानमा ३४९ सिट छन् । ३०० सिट इकोनोमी सिट छन् भने ४९ विजनेश सिट छन् । विजनेश सिटमा २ लाख ५० हजार सम्म उठाएको पाइयो भने इकोनोमी सिटमा १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ । त्योभन्दा पनि धेरै माथी नै रकम उठाएका केही गुनासाहरु पनि यात्रुहरुले गरे । सामान्य अवस्थामा विजनेश सिटको काठमाडौ अमेरिका ४९० डलर अर्थात ५७३३० रुपैयाँ मात्र हो । ‘अहिले मैले जुलाई ३ को अन्लाईन टिकट ७०० डलरमा काटेको छु तर अहिले अनलाईन छेक गर्ने हो भने कुनै टिकट त्यो दिनलाई उपलब्ध छैन । टर्किश एयरलाईन्सका कर्मचारीलाई पनि फोन गर्ने हो भने छैन भन्छन । तर ट्राभल एजेण्टलाई भन्ने हो भने रू २ लाख तिरे मिल्न सक्ने बताउँछन् ‘ रमेशले भने ।
टर्किस एयरलायन्सले वाईडबडी बोइङ्ग ७७७–३३ इआर (७७ बब्लु) पुरा सिटमा उडान भर्दा विजनेश सिटबाट २८ लाख ९ हजार ७० र इकोनोमी सिट १ करोड ४२ लाख ३१ हजार ७ सय रुपैयाँ सहित एउटा उडानमा १ करोड ७० लाख ४० हजार ७ सय ७० रुपैयाँ उठाउँथ्यो । तर महामारीको बेला विजनेश सिटबाट १ करोड २२ लाख ५० हजार र इकोनोमी सिटबाट ५ करोड २५ लाख रुपैया सहित ६ करोड ४७ लाख ५० हजार रुपैया उठायो । यस्तो लाग्छ यसरी एक हप्तामै नेपालबाट एउटा उडानमा ४ करोड ७७ लाख भन्दा बढी कुम्ल्याउन पाएपछि विमानले पनि किन दलालहरूको प्रयोग गर्दैनथियो ।
लाग्छ उसले ट्राभल सञ्चालकलाई दलाल बनायो । यसरी सिमित उडानमा मनपरी पैसा उठाउने आँट पाउँन मन्त्रालयलाई मोटो रकम हरेक हप्ता बुझायो । अनलाईन पत्रिका जनबोली डट कम लेख्छ, ‘विमानको नेपालस्थित कार्यालयका कर्मचारी घुस बुझाउन हप्तैपिच्छे मन्त्रालय पुग्छन् । उनीहरुले बुझाउने कर्मचारीको स्ट्रिङ्ग अप्रेशन गरिएको छ । यसपछि अर्को अपडेटमा प्रस्तुत हुनेछ । तर यो रकममा उसले ट्राभललाई र मन्त्रालय तथा सरकारी निकायसम्म पुर्यायाउने विचौलियालाई बुझाउनु परेकाले यो सबै रकम विमान कम्पनीमा पुगेको छैन । यसैले टिकटमा शुल्क विनाको इ–टिकट भनेर वर्ड फायल इडिट गरेर दिन्छन् । सहज तरिकाले सक्कली टिकट लिने वातावरण नै बनाएको छैन ।’
यहि बिषयलाई लिएर जनबोली डटकमले एयरलाइन्ससँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको रहेछ । पत्रिकाले लेख्छ, ‘टिकट नम्बर नै दिएर हामीले ट्राभललाई बुझाएको रकम यति हो तर यो टिकटको शुल्क कति इन्ट्री एको छ भनेर विमानको आधिकारी फेसबुकपेजमा च्याट गर्दा सिमित जानकारी मात्र दिएर आवश्यक सूचना नै नदिई च्याटबाट बाहिरिन्छन् ।’ यसले के देखाउँछ भने विमान कम्पनीलाईपनि यो कुरा थाहा छ की नेपालमा मनोमानी ढंगले टिकट बिक्रि भइरहेको छ ।’
अहिले भर्खर युरोप र अमेरिका लक्षित हुने चार्टर उडानबाट नेपाली ट्राभल एजेन्सीले कम्तीमा चार गुणा भाडा असुल्न थालेपछि बल्ल सरकारले कतार र टर्कीको उडान दोब्बर बनाएको छ । यद्दपि अझैपनि अन्लाईन टिकट उपलब्ध छैन । त्यसको लागि अगष्ट महिना नै पर्खिनु पर्छ । पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियाले भने, ‘चार्टर उडानमा यात्रुको गुनासो सुनिएकाले सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपालबाट कतारको दोहा र टर्कीको इस्तानबुलका लागि हुने नियमित उडानलाई दोब्बर बनाइएको छ ।’
‘चार्टर उडानमा भइरहेको मनपरीलाई कम गर्न जेठ १९ देखि सातामा एक उडान मात्र खुला गरिएका मुलुकमध्ये कतार र टर्कीमा सातामा दुईटा उडान गर्ने निर्णय भएको छ,’ पर्यटनमन्त्री अरगरियाले भने । यो निर्णय अनुसार अब नेपाल वायुसेवा निगम र कतार एयरवेजले सातामा दुईटा (आउने र जाने गरी चारवटा) उडान गर्ने छन् । त्यस्तै, सातामा एउटा मात्रै उडान गर्दै आइरहेको टर्किस एयरलायन्सले पनि दुईटा उडान गर्न पाउने छ । पर्यटनमन्त्रीले आन्तरिक उडान पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने तर मिति तय भइनसकेको बताए । ‘पहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्दै जानेछन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि आन्तरिक वायुसेवा पनि खुलाइने छ ।’
चार्टर उडानमा एजेण्ट र वायुसेवाको मिलोमतोमा भइरहेको मनपरी भाडाबारे आफूलाई प्रमाणसहित जानकारी प्राप्त भएमा विदेशी वायुसेवालाई निलम्बन सम्म गर्ने उनले बताएका छन् । उता टर्किश एयर्लाइन्सका कर्मचारीलाई सोध्यो भने पनि त्यसै भन्छन, ‘कसले भन्यो तपाईलाई टिकट छ भनेर ? हामीलाई त्यसको नाम र फोन नम्बर दिनोस न यहि बाट साटो लिन्छु म। ‘ बिचरा यात्रु त्यसै अलमल पर्छ । ‘तर ट्राभलले यतिसम्म चलाखी गर्दछ की शुल्क देखिने टिकट नै दिँदैन । विमानस्थलका कर्मचारीहरुपनि त्यसलाई मलजल गरिरहेका हुन्छन् ।’ एकजनाले भने । यसैबिच सीसीएमसीले मलेसिया, साउदी अरब, युएई र जापानमा नियमित उडान सुरु गर्न सकिने सिफारिस गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
‘त्यसैगरी पर्यटन मन्त्रालयले पनि केही अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडान खोल्न प्रस्ताव पठाएको जनाएको छ । होटल क्वारेन्टाइनबारे टुंगो लागेसँगै केही मुलुकमा थप उडान सुरु गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेका छौं,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । उपत्यकामा वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएपछि सरकारले २० गतेदेखि आन्तरिक र २३ गतेदेखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको थियो । नियमितमा रोक लगाइएपनि चार्टर उडानको टिकटमा केही नेपाली ट्राभल एजेन्टले मनपरी गर्न थालेपछि सरकारले जेठ १९ बाट भारतसहित, चीन, कतार र टर्कीकालागि सर्तसहित संख्या तोकेर नियमित उडान खुला गरेको थियो ।
यो अनियमितता र मनपरीको नियन्त्रण गर्ने कसले ?
यो पनि पढ्नुहोस: ट्राभल, कर्मचारी मिलेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चार गुणा बढी शुल्क, मन्त्रालयमा यसरी जान्छ घुस